I-PSL isibeke amaqembu amane amacala | News24
LAST UPDATED: 2019-07-22, 16:48
I-PSL isibeke amaqembu amane amacala
Cape Town - IPremier Soccer League (PSL) isibeke amacala amaqembu amane ngokwephula imithetho eyehlukene.
La maqembu azovela ngaphambi kweKomiti lokuQondisa iZigwegwe lePSL ngoLwesine, ngomhlaka-25 kuMeyi ngo-18:00.
MTHATHA BUCKS: Le kilabhu ibekwe icala lokuphula umthetho u-Rule 35.2 weNSL Handbook ngemuva kwezinsolo zokuthi lahluleka ukufaka isibalo okumele lisifake sabadlali abadlala esigabeni sabaneminyaka engaphansi kuka-23 (U23) ngesikhathi leli qembu lidlala neStellenbosch FC ngomhlaka-15 kuFebhuwari 2017, e-Athlone Stadium.
UMthatha Bucks uphinde wabekwa namacala okusabisa kanye nokuthuka ngenhlaba unompempe ngesikhathi ubhekene neFC Cape Town, eNNK Stadium, mhla zingu-6 kuMeyi.
OLUNYE UDABA: ISundowns iqinisekise eyokuvuselelwa kwenkontileka yesethenjwa
CAPE TOWN CITY: Le kilabhu ibekwe icala lokungahambisani neCompliance Manual ngemuva kokuthi isikhulu sayo safika ngemuva kwemizuzu engu-25 emhlanganweni wangaphambi kokuqala komdlalo owaba esikhathini esingamahora amathathu ngaphambi kokuba kuqale umdlalo wayo we-Absa Premiership neMaritzburg United, eHarry Gwala Stadium, mhla lulunye kuMeyi.
MILANO UNITED: Leli qembu libekwe icala lokungaziphathi kahle ngemuva kokuthi izikhulu zalo zafuna ukungena ngenkani endlini okushintshela kuyo onompempe ngemuva komdlalo walo weNFD neWitbank Spurs ngomhlaka-26 ku-Ephreli 2017, ePuma Stadium.
Lezi zikhulu zeqembu zaphinde zafuna nokuthi igumbi lokushintshela likanompempe liseshwe amaphoyisa ngoba zisola ukuthi onompempe bagwazeliwe.
JOMO COSMOS: Le kilabhu ibekwe icala lokuphula iCompliance Manual yePSL ngemuva kokuthi ihluleke ukuletha uhlu lwesikhashana lwabadlali abazodlala kwi-Match Commissioner esikhathini esingamahora amathathu ngaphambi kokuba kuqale umdlalo neRoyal Eagles, eTsakane Stadium, ngomhlaka-7 kuMeyi.
Ngaphezu kwalokho leli qembu liphinde labekwa icala ngokomthetho u-Rule 15.8 ngokunqaba ukuvumela iqembu elalizodlala nalo, iBlack Leopards, ukuthi lingene ezindlini zokushintshela emdlalweni wabo weNFD eTsakane Stadium ngomhlaka-26 ku-Ephreli.
Dunoon 16:39 PM
Cape Town 16:36 PM